တရုတ် LEGO ပရိတ်သတ်တွေက LEGO Pirates စုံကိုပိုပြီးလိုချင်ကြတယ်
27 / 01 / 2021 27 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 1237 Views စာ0မှတ်ချက် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ, 90th နှစ်ပတ်လည်, ဘိုင်အို, တရုတ်နိုင်ငံ, Classic အာကာသ, ပရိတ်သတ်မဲ, Ideas, Lego, Lego Ideas, စံပြအဖွဲ့, ပင်လယ်ဓားပြများ, အာကာသ, အဆိုပါ LEGO Group, သစ်သားဘဲ
A Lego ပန်ကာသီးခြားစီဖွဲ့စည်းထားပါတယ် Lego Ideas ၉၀ နှစ်မြောက်တရုတ်ပြည်မကြီးတွင်မဲပေးကြပြီးတရုတ်ပရိသတ်များက ပို၍ လိုချင်ပုံရသည် Lego ပင်လယ်ဓားပြများ။
အဆိုပါ Lego Ideas စင်မြင့်ကိုတရုတ်ပြည်မကြီးမှအသုံးပြုသူများအများအားဖြင့်လက်လှမ်းမမှီနိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Lego Group မှ အမြန်ဆုံး - ကြီးထွားလာစျေးကွက် p ယူလို့မရဘူးart ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက်နှစ် ၉၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ရန်မဲပေးရာတွင်ထိုအချက်ကိုတန်ပြန်ရန်၊ Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ သစ်သားဘဲ သီးခြား - ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့ - စစ်တမ်းတစ်ခုကတဆင့်စည်းရုံးခဲ့သည် တရုတ်စစ်တမ်းကောက်ယူမှုပလက်ဖောင်း.
တနင်္လာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ပိတ်ပင်ခဲ့သောထိုဆန္ဒမဲ၏ရလဒ်ကိုယခုအခါ၎င်းသည်အနိုင်ရခဲ့သည် အမှန်တကယ် Lego Ideas မဲပေးပှဲ။ စုစုပေါင်း 1,739 ပရိတ်သတ်တွေ p ကိုယူart - နှင့်နေဆဲနီးပါးအဖြစ်အများကြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိမထားဘူး Classic တရုတ်ပြည်မှာနေရာတွေမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေအများကြီးရှိတယ် Lego ပင်လယ်ဓားပြများ။
swashbuckling ခေါင်းစဉ်သည် ၆၉၂ မဲဖြင့်ရရှိခဲ့ပြီးမဲအားလုံး၏ ၃၉.၇၉% ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုအရ StoneWars ၏နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာတရားဝင်စစ်တမ်းတွင် Pirates များသည်တတိယမြောက်နေရာတွင်ရှိနေပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပိုမိုစားသုံးရန်အသင့်ရှိကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြ.
တရားဝင်မဲရရှိခဲ့ပုံရသည့် BIONICLE သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြင်းထန်စွာပြသခဲ့ပြီးမဲအရေအတွက် ၄၃၉ မဲ (သို့မဟုတ်စုစုပေါင်းအမည်စာရင်း၏ ၂၅.၂၄%) ရှိသည်။ တရားမ ၀ င်တရုတ်မဲဆန္ဒတွင်မဲအရေအတွက် ၅၇၅ မဲဖြင့်ရထားများရှိနေသည် Lego Ideas.
စာရင်းနှစ်မျိုးလုံး၏ထိပ်တစ်ဝိုက်တွင်ဤကဲ့သို့သောအခင်းအကျင်းမျိုးကိုတွေ့ရခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်သည်articularly ပေးထားသည် Lego ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အနောက်နိုင်ငံများတွင်လိုချင်တပ်မက်မှုနှင့်တူညီမှုမရှိပါ။
၎င်းသည်ထင်ရှားသော Model Team ၏ခေါင်းစဉ်သည် Wooden Duck ၏စစ်တမ်းတွင်ထိပ်ဆုံးသုံးခုတွင်လွဲချော်သွားပြီးမဲ ၂၄.၀၉% အထိရရှိထားပြီး StoneWars ၏စာရင်းသည်တရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲတွင်နံပါတ် ၁၀ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကိုလည်းပြောဆိုသည် Classic အာကာသ၏တရုတ်နိုင်ငံတွင်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ပါးမှု၊ ချစ်မြတ်နိုးရသည့်အဓိကအကြောင်းအရာသည်ပရိသတ် ၁၀.၇ ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သာရရှိခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, Wooden Duck ရဲ့စစ်တမ်းကတရားဝင်မဟုတ်ဘူး Lego Ideas မဲ သို့သော်တရုတ်၏ပင်လယ်ဓားပြများနှင့် BIONICLE အစုံအလင်ကိုပိုမိုမြင်လိုခြင်းသည်မည်သည့်အဓိကအကြောင်းအရာများအပေါ်ကောင်းစွာလွှမ်းမိုးနိုင်သည် Lego အုပ်စုသည်၎င်း၏နှစ် ၉၀ မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုရွေးသည်artတရုတ်စျေးကွက်တွင်မည်မျှအာရုံစိုက်ထားသည်ကိုမည်မျှအလေးထားပြောဆိုသည်ကိုမူအပြိုင်အဆိုင်ပြောဆိုခဲ့သည် အခုအချိန်မှာ.
← LEGO လက်ဆောင်နှင့်အတူ - ဝယ်ယူ 40417 အဆိုပါ Ox ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏နှစ်
Lego Star Wars 75292 Mandalorian Bounty Hunter Transport သည်စတော့ရှယ်ယာပြissuesနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည် →